यसरी डुब्दैछ कुमारी र एनसीसी बैंक, डुबाउने खेलमा को–को ? « Naya Page
यसरी डुब्दैछ कुमारी र एनसीसी बैंक, डुबाउने खेलमा को–को ?
काठमाडौं : काण्डैकाण्डमा मुछिएको कुमारी बैकमा फेरि पनि विवाद बल्झिएको छ । यसअगाडिका सीईओ उदयकृष्ण उपाध्याय यौन काण्डमा परेर चर्चामा आएका मात्र होइनन्, उनको जागिर नै गएको थियो । त्यसयता सञ्चालक बनाइएका अर्का एक व्यक्ति प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । यसरी कालोबजारी काण्डका नाइकेलाई कुमारी बैंकले पुरस्कृत गरेपछि सेयरधनीहरूमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । बैंकभित्र यस्ता काण्ड हुँदा राष्ट्र बैंक र प्रहरी भने रमिते बनिरहेको भन्दै सेयरधनीहरू रिसले आगो भएका छन् । भूकम्प र सोपछाडिको नाकाबन्दीको समयमा खानेतेलमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ता लुट्दै आएको काण्डमा केएल दुगड समूहको सञ्चालकहरू फरार रहेकै अवस्थामा कुमारी बैंकले भने सोही दुगड समूहका एक व्यक्तिलाई ल्याएर बैंकका सञ्चालकमा मनोनयन गरेपछि सर्वसाधरण सेयरधनीहरू बिच्किएका छन् ।
डा. शोभाकान्त ढकाल भाटभेटनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङका पाटर्नर तथा जग्गा दलाल हुन् । ढकाललाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासनजिकै रहेका १ सय २१ रोपनी सरकारी जग्गा विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यहाँ उत्तमप्रसाद भट्टराई, विनोद दवाडी, पुनाराम भट्टराईहरू सञ्चालकका रूपमा छन्् । तर, यही हारमा छन् नरेश दुगड । खानेतेलमा स्टिकर परिवर्तन गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई ट्रक खानेतेलसहित दुगडको मान्छेलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध उपभोक्तावादीहरूले ९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यही अभियोगमा दुगड गु्रपका मुख्य सञ्चालकहरू फरार छन् । तिनैमध्येका एक प्रहरीको फरारको सूचीमा रहेका व्यक्ति कुमारी बैंकमा सञ्चालकका रूपमा देखिनु निरीह राज्यको नमुना भएको बताइन्छ । सो बैंकमा केएल दुगड गु्रपका सञ्चालक नरेश दुगड अहिले पनि बोर्ड सञ्चालकका हैसियतमा कार्यरत छन् ।
त्यसो त काण्ड र कुमारी बैंक एक अर्काको परिपुरक भइसकेका छन् । राधेश पन्त सीईओ हुँदा समेत बैंक विवादमा मुछिएको थियो । कुमारी बैंक मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो प्रयास पछाडि सुधारेको एनसीसी बैंकमा समेत यस्तै काण्डवाल सञ्चालक रहेको भेटिन्छ । त्यहाँ १८ करोड रुपैयाँ फर्जी ऋण काण्डका नाइके नै सञ्चालकका रूपमा रहेको भेट्न सकिन्छ । उनी हुन् एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुुप्रसाद धिताल । उनीमाथि फर्जी कागजात र नक्कली ऋणी खडा गरेर झन्डै ५० जना सोझासाझा व्यक्तिहरूको नाउँमा १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा निकालेको आरोप छ ।
दुई सातादेखि घुन्साबस्ती सञ्चार सम्पर्क बाहिर